२० प्रतिशत नेपालीमा मुटुरोगको समस्या, मुटुलाई स्वास्थ्य राख्न डा. भट्टराईको यस्तो सुझाव [भिडियो कुराकानी ]
काठमाडौं– आज विश्व मुटु दिवस । विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रम गरी देशभर यो दिवस मनाइदैंछ । हरेक वर्ष दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरेपनि मुटुरोगीको संख्या भने घट्न सकेको छैन ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियो थोरसिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका मुटु रोग विशेषज्ञ डा. अनिल भट्टराईले पछिल्लो समय मुटु रोगीहरु बढ्दै गएको बताए ।
लोकान्तर डटकमको कार्यक्रम लोकान्तर हेल्थ शोमा कुराकानी गर्दै डा. भट्टराईले पछिल्ला वर्षहरुमा अस्पतलमा मुटुरोगीको चाप बढ्दै गएको बताएका हुन् । उनले नेपालको जनसंख्याको २० प्रतिशत मानिसमा कुनै न कुनै प्रकारको मुटु रोग भएको बताए ।
‘हिमाली क्षेत्रमा जन्मजात मुटुरोगी,पहाडी र तराई क्षेत्रमा मुटुको भल्भमा खराबी र शहरी क्षेत्रमा हार्टअट्याकको जोखिम बढी रहेको देखिन्छ,’ डा. भट्टराईले भने, ‘टन्सिलाइटिस, उच्च रक्तचाप,मधुमेहको समयमा उपचार नगर्दा पनि मुटुरोगको जोखिम उच्च रहन्छ ।’
मुटुरोगबारे जनचेतना जगाउन सरकारले गरीरहेको कार्यक्रमहरु प्रयाप्त नभएको भन्दै उनले स्थानिय तहमा रहेका स्वास्थ्यसंस्थाबाटै मुटुरोग यसको रोकथाम तथा उपचारको विषयमा जनचेतना फैलाउनु पर्ने बताए ।
उनले मुटुरोगका विरामीले उपचारका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले कम्तिमा ७ वटै स्थानिय तहमा मुटुरोगको उपचार केन्द्र भएमा विरामीको उपचारमा सहज हुने उनको भनाई छ ।
हेरौं डा. भट्टराईसँग गरिएको भिडियो कुराकानी :